Buugaag uu qoray César Pérez Gellida
Buugga César Pérez Gellida
3 buug ee ugu fiican César Pérez Gellida
Mala -awaalka adeegga dembiga. Ma isku dayayo inaan tilmaamo gacan ku dhiigle hal abuur leh laakiin qoraa awood u leh inuu ka sameeyo dooddan soo jeedinta dembiilaha, inta u dhaxaysa cudurrada iyo kuwa dhibta leh. Waana halkaas meesha mala -awaalku ka qaadanayo muhiimaddeeda gaarka ah, oo ay weheliso xafiiska qoraaga oo shaqada ku jira. ...
Nasiibka dwarf, waxaa qoray César Pérez Gellida
Ilaah baa mahad leh, erayga dwarf ma jiro eray -bixin ama neoterm oo u ekaan kara mid ku habboon "neo" inuu faafreebo cinwaanka sheekadan. Waxay iila muuqataa wax weyn, haddii dwarfku nasiib leeyahay, ha la ogaado. Kaftanka dhinac, buuggan cusub ee uu qoray Pérez Gellida oo ka beddelaya Jo Nesbo una beddelaya Juan ...
Waxa ugu xun oo dhan, waxaa qoray César Pérez Gellida
Gudaha César Pérez Gellida wax walba waxay ku helaan bartaas shineemada, ficilka frenetic -ka ee u rogaya xiisayaashiisa mawjadaha xiisaha badan ee xiisaha akhriska. Markaa qorshe kasta oo cusub wuxuu ku dambayn doonaa in ay cunaan akhristayaasha isla xawaaraha isku midka ah ee soo jeedinta sheekadiisa. Xitaa intaa ka sii badan taxanahan cad ee ...
Dhammaan wanaag, waxaa qoray César Pérez Gellida
César Pérez Gellida oo aan gubanayn ayaa dib isu cusboonaysiiyay si uu u dhasho mid ka mid ah shaqooyinkiisii ​​ugu dhammaystiran. Ka dib markii ay ku bateen nooca noir ee hadda jira, iyada oo loo marayo saddex -geesood oo mar horeba astaan ​​u ahaa hiddaha waddankeenna, markan wuxuu na siinayaa goob dib -u -eegis loogu talagalay sheeko madow ...
Konets, oo uu qoray César Pérez Gellida
César Pérez Gellida wuxuu ku guuleystey inuu abuuro koonkiisa gaarka ah oo ku saleysan qaab -dhismeedka bilicsanaanta iyo mowduuca oo si buuxda loo aqoonsan karo. Buugga dambiyada Isbaanishka wuxuu qoraaga ka hela tixraac aad u cusub oo la tixgeliyo oo leh karti hal -abuur aan la loodin karin. Olek ayaa mar kale ah jilaha qaybtan. ...